Ngenkathi kwakhiwa indlu yangasese yomnikazi esizayo ngokuvamile ebuza indlela ukuhlela kahle kuze kulahlelwe ngaphandle. Phela lula emgwaqeni - ezingasehlela akuyona indlela engcono kakhulu yokwakha umuzi wakho ukhululekile.
Ekutheni ziyenze kanjani indle phrojekthi uzobe ekhethiwe, ke kuxhomeke kakhulu kalula yayo yokusetshenziswa nokunakekelwa esikhathini esizayo. Hlela uhlelo ubunjiniyela, njengezinye eziningi, kungcono kakade esigabeni ukwakhiwa. Endlini esiphelele ngeke uyibambe kancane more xaka, ngoba ngokuvamile msebenzi lihlotshaniswa sokugqekezwa zokuphindaphindeka, okwenza ushintsho olufanele kuya isisekelo sendlu, njll
ukukhucululwa iphrojekthi kumele ithuthukiswe kuhambisana yonke imithetho efanele kanye nezinqubomgomo. Emizini yabazalwane ngokuvamile bahlela uhlelo engaziwa indle. Ngokuvamile lokhu kungenxa yokuthi emizaneni nasemadolobheni zokuxhumana eyodwa - into ngempela ezingavamile, futhi ngenxa yalokho ixhunyiwe, eqinisweni, akukho.
Kulokhu-ke ahlelwe cesspool, okuyinto akufanele kube ngaphansi kuka-5 amamitha kusukela zokuhlala. ivolumu emizini yabazalwane isilinganiso 1.5 m3 wayo. Uma idivayisi ye sump kufanele kwenzeke ukufinyelela umshini ke-flusher.
Ngaphezu kwalokho, amanzi kumele kwenziwe ekhaya ukuze ususe ukuphazamiseka anokungcola nge umpompi. Zikhona amaphuzu amaningana esibalulekile okufanele sicatshangelwe lapho kwakhiwe luhlaka. Endaweni yokuqala, kumele kwenziwe lokhu amapayipi amapayipi phezu amakamelo ophahleni eziphilayo. Singeke bayibeke kule izindonga naphansi amakamelo ophilayo, amakamelo kanye emakhishini.
Izakhi eyinhloko okubandakanya noma iyiphi iphrojekthi amapayipi futhi se phayiphu, yokuxhuma ngayo izinto zenzelwe ukusetshenziswa ngqo (nokucwila, izindlu zangasese, yokugezela, njll) Kukhona imithetho ethile lapho ukushuba we amashubhu yesikhuphukeli futhi esimweni uma ethoyilethi imiganu exhunyiwe nalokho, kumele okungenani ibe 10 cm ku kwezinye izimo - .. okungenani 5 cm amapayipi legatsha emthambekeni maqondana abakhwabanisi osenyameni amanzi kufanele kube hhayi ngaphansi kuka 0,033 g.
Ukukhucululwa izinhlelo ahlelwe nge cast iron, steel, amapayipi epulasitiki. esetshenziswa Ngaphambili le njongo ngokuyinhloko waphonsa imikhiqizo yensimbi. Ziyakwazi okunokwethenjelwa futhi iqine. Namuhla ethandwa kakhudlwana, ungabiza ipayipi plastic. Ngaphezu kwalokho banayo nokwethenjelwa ngisho eziningi eziwusizo - the ikhono lokwamukela umsindo, kalula ukufakwa, ukumelana namakhemikhali ezivamile, njll Into kuphela okufanele zicatshangelwe, - ukuchayeka kwe-polypropylene kanye polyethylene UV imisebe. Ukuze afeze ipayipi enjalo ifihlekile kangcono - ngaphakathi ophahleni nezindonga.
Okuhle kunakho konke ukuthi, uma iphrojekthi amapayipi ngeke ukuklama ochwepheshe. Nokho, ngoba indlu encane ukwenza iplani isimiso sokukhuculula at amanzi udoti kungaba zabo. Kuyinto kudingekile kuphela ukuba bacabangele zonke Kucatshangwa kulesi sici imithetho nezimfuneko. Uma kwenziwa ngokucophelela futhi ucabangisise, indle owawusemzini womzalwane izothatha iminyaka eminingi ngaphandle kokudala izinkinga ezingadingekile umnikazi.
Indlela refinish amapulasitiki: polishes nobuchwepheshe
Amathiphu ambalwa okuthi "VKontakte" angashintsha kanjani igama